"ဒုတိယလိုင်း" ဝန်ထမ်းများအတွက်အသစ်ပြန်လည် Macron ဆုကြေးငွေဆီသို့?
Posted by ကို Tranquillus | 16 ပင်လယ်, 2021 | web ပေါ်မှာ
၀ န်ကြီးချုပ် Jean Castex သည်မတ် ၁၅ ရက်တနင်္လာနေ့တွင်ပြုလုပ်သောလူမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ၊ Matignon သည်အလုပ်သမားများ၏ခေါ်သူများ၏အကျိုးအတွက် Macron ဆုကြေးငွေဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသောစက်ပစ္စည်းတစ်ခုတီထွင်ရန်ငွေပေးရသည် "ဒုတိယမျဉ်း"ကြာသပတေးနေ့ထုတ်ဖော် သည် Le Parisien et က Les ပဲ့တင်သံ.
Macron ဆုကြေးအဖြစ်လူသိများသောထူးခြားသော ၀ ယ်ယူနိုင်စွမ်းအပိုဆုကြေးကို“ အဝါရောင်အင်္ကျီများ” ၏ဒေါသကိုနှစ်သိမ့်စေရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အကုန်တွင်နေရာချခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၀ င်ငွေခွန်မ ၀ င်သည့်ငွေပမာဏကိုပုဂ္ဂလိကအလုပ်ရှင်များသို့ပေးအပ်ရန်နှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ဆောင်မှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသောလုပ်ခသည်အနည်းဆုံးလုပ်အားခထက်နိမ့်ကျသောလုပ်အားခ (Smic) ထက်သုံးဆလျော့နည်းနိုင်သည်။ 2018 ခုနှစ်တွင်အများဆုံးငွေပမာဏ€ 2019 ရောက်ရှိနိုင်ဘူး။ နောက်နှစ်တွင်အမြတ်ခွဲဝေမှုသဘောတူညီချက်မရှိဘဲကုမ္ပဏီများတွင်ယူရို ၁၀၀၀ နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများတွင်ယူရို ၂,၀၀၀ အထိရှိသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ကိရိယာအသစ်၏စည်းမျဉ်းများကိုဆုံးဖြတ်ရ ဦး မည်။ တနင်္လာနေ့တွင်ကျင်းပမည့်လူမှုရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲညီလာခံတွင်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့်အလုပ်ရှင်များသို့ပေးပို့နိုင်သည်။
"ဒုတိယလိုင်း" ဝန်ထမ်းများအတွက်အသစ်ပြန်လည် Macron ဆုကြေးငွေဆီသို့? ဇူလိုင်လ 8th, 2021Tranquillus
အောက်ပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာသားကို proofread လုပ်နည်း။